लोडसेडिङमुक्त तिहारः सबैको बत्ती बनेका कुलमान ! « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, २२ कात्तिक । तपाईको कुनै व्यक्तिगत कारण बाहेक विजुली बत्तीको कारण यो तिहारमा तपाईको घर अँध्यारो छैन । अर्थात उज्यालोको यो पर्व तिहारमा तपाईको घरमा विजुलीबाट बल्ने थरि थरिका बत्तीहरु चम्किरहेको छ ।
लोडसेडिङ गराउनेहरुलाई किन कारवाही भएन ?
लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै नौलो प्रविधि नभई भएको स्रोत र साधनलाई उचित व्यवस्थापन गरेको बताउँदै आएका छन् । तर प्रमुखका रुपमा कुलमान घिसिङ आउनु पूर्वको र अहिलेको विद्युत उत्पादन र मागमा अकाश पतालको फरक थिएन । तर व्यवस्थापन गर्ने प्रमुखको क्ष्मतामा भने आकाश पतालको भिन्नता भएको तीन वर्ष अघिको तिहार र अहिलेको तिहारले प्रमाणीत गरिसकेको छ ।
तत्कालीन समयमा लोडसेडिङ हुनुको पछाडि प्राधिकरण भित्रकै उच्च पदस्थनै निजी कम्पनीहरुको आर्थिक प्रलोभनमा फस्ने गरेको धेरैको आशंका छ । लोडसेडिङ हटेको दुई वर्ष हुनलाग्दा पनि लामो समयस लोडसेडिङको अँध्यारोमा राख्ने प्रधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारी, तत्कालीन उर्जामन्त्री लगाएतमाथि छाविन समेत भएको छैन ।
उपत्यकाभित्रको सुरक्षाका लागि २१ हजारभन्दा बढी सीसी क्यामेरा आवश्यक